आफ्नी श्रीमतीका लागि पनि बनाएका छन् किम जोङ उनले यस्ता कडा नियम, जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ ! - Nepali in Australia
March 30, 2021 March 30, 2021 autherLeaveaComment on आफ्नी श्रीमतीका लागि पनि बनाएका छन् किम जोङ उनले यस्ता कडा नियम, जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ !
स्वीटजरल्याण्डको जर्मन स्कुलमा अध्ययन गरेका हुन् । सन् १९९६ बाट २००० सम्म किमको पढाइ यूरोपमा भएको थियो । सुरूवातबाटै उनी आफ्नी आमाकी बहिनीका साथ रहेका थिए । सन् १९९८ मा उनी अमेरीका गइन् र नाम परिवर्तन गरिन् । द वाशिंगटन पोस्टसँगको अन्तरवार्तामा उनकी सानी आमा को यंग सकले भनेकी छिन्, “किम समस्या उत्पन्न गर्ने बालक त थिएनन् तर उनी चकचके र सहनशील थिएन ।’’ किमसँगै पढ्नेहरुले उनलाई दूतावासमा काम गर्ने कुनै कर्मचारीको छोरा भएको अड्कल गरेका थिए ।